ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “လေသေနတ်ပစ်ခြင်း နှင့် အပေါက်ဖာခြင်း”
I do respect you, Ko Soe Thiha, and all Overseas Burmese Patriots. Your article gives us strength. Many thanks.
ကိုစိုးသီဟ နဲ့ ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများ အားလုံး ကျေးဇူးပါ။
နိုင်ဖို့ကို အဓိကထား လုပ်ကြရမဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာပြီးရော အော်ချင်တာ အော်၊ ဆော်ချင်တာ ဆော်၊ ငါ့ဘ၀ငါ ရင်းပြီးလုပ်တာ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လျှာလာမရှည်နဲ့၊ မင်းတို့လုပ်ရဲလားဆိုတာမျိုး လုပ်မဲ့/တဲ့လူတွေကို ရှုံ့ချပါတယ်။ အဲဒါလုပ်သွားတော့ သူတို့ကတော့ ငါတာဝန်ကျေပြီဆိုပြီး စိတ်ကလေးတွေ ချမ်းသာလို့၊ နောက်လူတွေက ပိုမိုကျပ်တည်းပြီး လှုပ်မရ ရှားမရ ဖြစ်ကုန်ရော။ စစ်ကျမ်းတွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ နပိုလီယံ ရုရှားမှာ ဘယ်လို ကမ္ဘာပျက်သွားလဲ၊ ဟစ်တလာကြီးရော ရုရှားမှာ ဘယ်လို ဂိသွားလဲ။ စစ်မျက်နှာ ၂ ဖက်ဖွင့်တဲ့လူတိုင်း ဂိကုန်ကြတာချည်းပဲ။ အစကတည်းက အားကမမျှချင်ပါဘူးဆိုတာကို ကိုယ့်ကို နှိပ်ကွပ်မဲ့ ရန်သူအသစ်ကို ရှာတာကတော့ အရမ်းအရမ်းကို ချာတူးလန်တဲ့ မဟာဗျူဟာပါပဲ။ ဆွန်ဇုကို ဖတ်ကြစမ်းပါ။
1) ကျနော်ငယ်စဉ်က ဦးလေးအရင်း တိမွေးကုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟာ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့လို့ ထောင်ထဲမှာ ငါးနှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ (1974 ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့)
2) ဦးလေး ထောင်ကလွတ်လာတော့ တက္ကသိုလ်လဲ ပြန်တက်ခွင့်မရဘူး။ တခြားအလုပ်အကိုင်တွေလဲ အဆင်မပြေရှာဘူး။ ဦးလေးရဲ့ချစ်သူကလဲ အိမ်ထောင်ပြုသွားပြီ။
3) ပြောရမယ်ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်ကို အံတုခဲ့တဲ့ ပုံပြင်တွေထဲက မြင်နေတွေ့နေကျ ဆင်တူယိုးမှားဇာတ်လမ်းခွဲ တခုပါ။
4) 1988 မှာ ကျနော်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တတိယနှစ်ကျောင်းသားပေါ့။ ကျနော်တို့ရှေ့မှာ ဘ၀နဲ့ရင်းခဲ့ကြရတဲ့ သာဓကတွေအများကြီးကို မသိမဟုတ်၊ သိခဲ့ပါတယ်။
5) သိသိချည်းနဲ့ မတရားမှုကို ခေါင်းငုံ့မခံခဲ့ပဲ စစ်အာဏာရှင်ကို အံတုခဲ့ကြပါတယ်။ ဇွန်လကျောင်းတွေပြန်အဖွင့်မှာ တောင်းဆိုချက်တွေ၊ ကြွေးကြော်ချက်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲကိုပြင်ဆင်ပြီးမှ တိုက်ခဲ့တာပါ။
6) ဒါလုပ်ရင် ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိခဲ့သလို၊ အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်၊ ရေကြည်အိုင် စစ်ကြောရေးထဲရောက်ခဲ့တယ်၊ အနည်းဆုံးထောင်ဆယ်နှစ်ကနေ နှစ်နှစ်ဆယ်အထိကျသွားနိုင်တာလဲ သိခဲ့တာပါပဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ပျိုရွယ်မှုတွေ အနာဂတ်တွေဟာ လမ်းဆုံးကို ရောက်သွားနိုင်တာလဲ တွေးထားပြီးသားပဲ၊ ကျနော်တို့တတွေဟာ သူရဲကောင်းတွေမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ်အရိုင်းမခံခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်က အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ပြန်တွေးတိုင်း ကျေနပ် အားရမိခဲ့တာချည်းပါ။ အဲဒီတုန်းက အဲဒီလို မလုပ်မိရင်သာ တွေးမိတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှက်နေရမှာ။
7) ဒါတွေဟာ ကျနော့်ဦးလေးအပါအ၀င် ကျနော်တို့ရှေ့ က လမ်းပြကြယ်တာရာ တွေကြောင့်ပါ။ သူတို့သာ မိမိရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှံးနစ်နာမှာတွေကို တွေးကြောက်ခဲ့ပြီး၊ မတရားမှုကို သူရဲဘောကြောင်စွာ နှုတ်ပိတ်ခေါင်းငုံ့ ခံခဲ့မယ်ဆိုရင် …………………
8) တိုက်ပွဲတွေဟာ အချည်းနှီးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ခွန်အား၊သတ္တိတွေ၊ မတရားမှုကို စက်ဆုပ်ရွံရှာစိတ်တွေကိုသာ ခေတ်အဆက်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းနေရင်း၊ ရှင်သန်နေထိုင်မှုအတွက် မရိုးနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို အမြဲမေးနေပါလိမ့်မယ်။
HI KO PAW, I THINK YOU MENTIONED THIS POST FOR SOMEONE WHO DISAGREE WITH YOUR IDEAS.
I DO NOT LIKE THIS KIND OF MANNER. PEASE BE GENTLEMAN.
BY THE WAY, ARE YOU REALLY PERTICIPATE IN SINGAPORE?
to "law shay":
i agree with you that strategy matters. i amafan of Sun Tzu.
in life, there are many choices and there are many ways of doing. it is easy to criticize others who are not same as you. but it takes your understanding to empathize others.
my aim for writing above post is to encourage embracing of diversity and cooperating and collaborating on common ground.
let's say, if there were two or more groups advocating for Burmese causes at that time but with two or more different strategies, interested person would have more options and could choose to join the one he believe.
that is my purpose of writing this post. do something that you believe by leading. do something that you believe by following. do something that you believe by advising/helping.
i am not addressing to your concern about the issue of stricter condition aftermath as it really depends.
we have no intention at all to open another battle front.
i requested Ko Paw to help me post what my writing on his blog. if you think, my article is offensive to anyone, then i am offensive to both sides. from the very start, i have requested to allow me to aim my verbal shooting up the sky.
i humbly meant to provoke readers to stand up and do something that he/she believes in for the benefits of his/her country. and be open to diversity, be generous to collaborate and cooperate.
တော်တော် များများ က ဝေးဝေး ကနေပြီး....ပွဲပြီးမှ ဟိုလို လုပ်တာမှားတယ် ဒီလိုက မှားတယ်....ဘယ်စာအုပ် ထဲမှာ သမိုင်းထဲက ဘယ်လို ဆိုပြီး ဆရာကြီး လေသံ တွေများနေလို. နအဖ အစိုးရ သက်ဆိုး ရှေနေသလို...ပြည်ပက တိုင်းပြည်တွေ ကလည်း မြန်မာ လူမျိူးဆို လုပ်ချင် သလို လုပ်နေတာ...
ဆရာကြီး များခင်ဗျား....စ လုံး အစိုးရက Speaker corner မှာတရားဝင် ဆန္ဒပြခွင်. 1st -Sept-08..ကစပြီး ရပြီတဲ....
ခင်ဗျား တို. လေ သက်သက် မဟုတ်ဘဲ...လက်တွေ. သက်သေပြကြရအောင်။။။
It is good to hear such stories, but let me tell you some stories back. When I grew up, I grew up with some leftist books and I was sympathetic to communists and revolutionaries, Che, En Lai, Mao (not much as I hate that sucker since kid), Ho and list go on. I thought one day, I will bearevolutionary, reading Tha Khin Than Htun's last days I, II did not tarnish my admiration for BCP, I thought I will even join north east military region. I thrilled when I talked with some colonels, majors, captains, NCOs, who fought wars in those areas. Looking back, I was crazy, I was young, naive, and vulnerable for manipulation. Fast forward to 2000s, I amabit matured and not only exposed to leftist's agenda but been tasted some rightists' receipe and now I know all are full of BULL SHITS or HORSE DUNGS. Here I am not saying anything bad to Ko Soe Thiha, if I were not wrong, I know him he played soccer and he surely isaguy who knows what he is doing. But I amabit pissed off and disagree with you Mr.P is that while your uncle did, you did and so on is good. Where are the m..ther f..kers who are begging money as exile, where are those c..k s..kers who are exploiting Burmese woes to accumulate their wealth. Where are our pathetic old farts who called themselves freaking exile government, where are so called xxx. I am sick of everyone both government and exile politician c..k suckers. I am sure some of bums outside country may be counting towards the day our Daw Su passed away so that they can try to get her place. Good luck for you, Ko Soe Thi Ha and take care. I know you areahelpful guy, keep up with good work. Take care.
နိုင်ငံခြားသားတွေ မပါဘူး။ ရပ်ကြည့်ရုံပဲ ကြည့်ရမယ်။
တချီကောင်း တခါကောင်း အပြုတ်တိုက်ရင်တိုက်၊ မတိုက်ရင်လဲ မတိုက်နဲ့။ တိုက်မှာလိုလို၊ နိုင်မှာလိုလို၊ ရှုံးမှာလိုလို လာမလုပ်နဲ့။ အဲလိုလုပ်ရင် ကိုယ့်ဘက်ကပဲ အကျအဆုံးများတယ်။ ဒီပွဲမှာဆိုကြည့်။ ကိုယ့်ရန်သူနဲ့တောင် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ မတွေ့လိုက်ရဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထပ်မွေးလိုက်တဲ့ ရန်သူက ဆော်တာ အလဲလဲ အကွဲကွဲ။ ကိုယ့်ဘက်ကလူတချို့တောင် မှားပါတယ် အော်သွားသေးတယ်။ ဗျူဟာအရ လုံးဝတလွဲကြီးပဲ။ (မှားတာမှန်တာနောက်ထား) လွဲတာက လွဲတာပဲ။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပေးဆပ်တယ်ပြော၊ အပျော်ကြီးပျော်လို့။ ငါတာဝန်ကျေပြီဆိုပြီး စိတ်အေးလို့။ စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆို မလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်မနေပဲ ငြိမ်ငြိမ်နေပါ။ တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အစကနေအဆုံး သေချာစီစဉ်ပြီးမှလုပ်ပါ။ အော်ရုံ၊ ဟစ်ရုံ စေတနာရှိတာ သိရဲ့လား လုပ်ရုံဆိုရင်တော့ အလကားနေရင်း တကယ်ချမဲ့လူတွေအတွက် ရန်များအောင် အော်မနေနဲ့။ ပါးစပ်ပိတ်နေလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
အောက်ဆုံးတွင် အမည်မသိ မှတ်ချက်ပေးသူတဦး၏ လောရှည်အား ဆဲရေးတိုင်းထွာထားသော ကွန်မင့်ကို ဖျက်လိုက်ပါသည်။ ဤဘလော့တွင် ညစ်ညမ်းသော စကားလုံးများဖြင့် မဆဲရေးသရွေ့ အမြင်ပေါင်းစုံသော ကွန်မင့်များကို ခွင့်ပြုထားပါသည်။
ကျွန်တော်ပြောတာ ကရုဏာဒေါသောနဲ့ နည်းနည်းကြမ်းသွားတယ်။ အဓိကပြောချင်တာက ကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့ မိတ်ဆွေတွေများလာအောင် တတ်နိုင်သလောက်လုပ်၊ ကိုယ့်ကို ရန်ပြုမဲ့ ရန်သူတွေ နည်းသွားအောင် (ပေါ်မလာအောင်) တတ်နိုင်သလောက်လုပ်သင့်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။ မိတ်ဆွေ မတိုးနိုင်ဘူး (အကြောင်းကြောင်းကြောင့်) ဆိုရင်တောင် ရန်သူအသစ် ပေါ်ထွက်မလာသင့်ပါဘူး။
ဘေးကရပ်ကြည့်မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ရန်သူတိုးလာတာ မဟာ့မဟာ အဆိုးကြီးပဲပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ငါတို့ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး အပြင်ကိုထွက် မိသားစုကိုလုပ်ကျွေးနေရာမှာ ထွက်လာတဲ့ အပြင်ဆိုတာကြီးကပါ နင်တို့လဲ ပြန်တော့ဆိုရင် သူတို့မိသားစုတွေ ငတ်သွားမှာ။ ဒါဆို ရပ်ကြည့်မဲ့လူက ရပ်မကြည့်တော့ပဲ ရန်သူဖြစ်သွားမဲ့ အပြင်ဆိုတာကြီးကို ကပ်ဖားပြီး အချင်းချင်းကို ထုတော့မှာမို့လို့ပါပဲ။ ဒါဆိုရင် မူလရန်သူ၊ ထပ်မွေးထားတဲ့ ရန်သူ၊ ထပ်မွေးထားတဲ့ ရန်သူက ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်ဆီးမှာကြောက်လို့ သူ့ကိုမဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ ကိုယ့်ဘက်က ဖြစ်သင့်တဲ့ ရန်သူ ၃ ယောက်ပေါင်းလဲ တီးရော ပိုပြီး အလဲလဲ အကွဲကွဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အခုလက်ရှိတောင် တချို့တချို့ဆီက ကြားနေရတာ ဒီကောင်တွေ အမေရိကားမှာ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံလို့ရဖို့ အသံကောင်းဟစ်နေတာလို့ ဝေဖန်နေသံတွေ ကြားနေရပါတယ်။
“ ထာဝရ ပွင့်လန်းနေသော" ကိုဆက်ရေးဦးဗျို့..
"အခုလက်ရှိတောင် တချို့တချို့ဆီက ကြားနေရတာ ဒီကောင်တွေ အမေရိကားမှာ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံလို့ရဖို့ အသံကောင်းဟစ်နေတာလို့ ဝေဖန်နေသံတွေ ကြားနေရပါတယ်။"
သူတို့ နဲ့နီးစပ် ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေဆီက ထွက်နေတဲ့ စကားတွေပါ။ ဟုတ်ရင်ကျော်၊ ပုတ်ရင်ပေါ် ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံလေးကို သတိရစေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ပိုစ့်မှာ အမည်မသိ က ရေးခဲ့တာပေါ့။
ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိ ထင်ရာမြင်ရာကို ပြောရပြီးရော အကြောက်အကန်ငြင်းနေတဲ့
Lun Lunn နဲ့"I mind you.... be carful with your words..! " လို့ ဆိုလာတဲ့ Burmese in SG တို့ကိုလောရှည် ရေးထားတာကို သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်..။
စာဖတ်သူ သို့ ...
ကျွန်တော် ရေးထားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာကို သေသေချာချာ နားလည်အောင် ဖတ်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာထဲမှာ “တစ်ခြားနိုင်ငံကို သွားဖို့ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်နေသယောင် အပြုသဘော ကင်းမဲ့စွာ ပြောဆိုတဲ့” ကိစ္စကို လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက် စာနာ နားလည်စေရန် အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းပြ ရေးသားခဲ့ခြင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြောဆိုရာမှာ မိမိ ယုံကြည်ရာ၊ ခံယူချက်အရ ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြုသဘောဆောင်သော ပြောဆိုတင်ပြမှုသာ ဖြစ်သင့်ပြီး သူတစ်ဖက်သား ထိခိုက်နစ်နာအောင် ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းဟာ ဘယ်ရှုထောင့်ကပဲ ကြည့်ကြည့် မသင့်တော်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်တဲ့ လူငယ်တွေ အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ဆောင်ရွက်ရာမှာ အယူအဆ၊ ရပ်တည်ချက်၊ စွန့်လွှတ်နိုင်မှု အစရှိသည်တို့ပေါ် မှုတည်ပြီး သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေ အမြဲရှိနေမှာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ တူတာတွေ စုလုပ်ကြပြီး မတူတာတွေကို ငြင်းခုန်ပြီး စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် ပြုမှုနေမယ့်အစား အပြုသဘောနဲ့ ညှိ့နှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
လွန်လွန်း နဲ.စင်္ကာပူက မျိူးချစ်များ.....
အတုကအတု နေရာမှာ ရှိသလို အမှန်အကန်ကလည်း အမှန်အကန် နေရာမှာ ရှိပါတယ်။။။။
လူပေါင်းစုံ ဆိုတော. ကြွက်ချေး ကတော.ပါမှာဘဲ။။။
စင်္ကာပူက ကျဉ်းပါတယ်....ဘယ်သူတွေကဘာလဲဆိုတာ သိနေရမှတော.
ဘေးက လေသနပ်ပြစ်နေကြတာကို အချိန်ကုန်ခံပြီး ဖြေရှင်းမနေပါနဲ....
အကြောက်တရားတွေ မကင်းသေးတဲ.သူများကတော. ဘေးကနေဘဲ လေသနပ်ပစ်နေကြအုံးမှာ..
အဲဒီလူမျိုးတွေ များနေလို. နအဖ သက်ဆိုးရှေ နေတာပေါ.....
Thx for ur post..and thx for ur efforts for our country..
but i guess some ppl still dun understand wat u really mean...
Anyway, pls move forward...